Android Go: Kedu ihe ọ bụ na ihe bụ isi ya | Gam akporosis
Gịnị bụ gam akporo Go? Kedu ka o si dị iche na ụdị ndị ọzọ?
A mara ọkwa gam akporo Go n'akụkụ gam akporo Oreo. Kemgbe ọkwa ya na ntọhapụ sochiri, enwere ọtụtụ obi abụọ banyere ụdị sistemụ arụmọrụ a. Enwere akụkụ ụfọdụ gbasara ya nke doro anya, dịka na ọ bụ nsụgharị maka obere ala. Mana n'otu oge ahụ ọ na - eweta ọtụtụ obi abụọ na ndị ọrụ. Ya mere, anyị na-agwa gị gbasara ya.
Ka ọ were nwee echiche doro anya karị banyere ihe gam akporo Go bụ. Ebe o yikarịrị ka ị nwere obi abụọ banyere ụdị a, njirimara ya ma ọ bụ ihe na - eme ka ọ dị iche na nsụgharị ndị ọzọ nke sistemụ arụmọrụ anyị na - ahụ ugbu a.
1 Gịnị bụ gam akporo Go?
2 Gịnị Na-eme gam akporo Go Dị Iche?
3 Android Go = Android dị ọcha?
Gịnị bụ gam akporo Go?
Android Go abụghị ụdị dị iche iche nke sistemụ arụmọrụ, ọ bụghịkwa mmelite. Ọ bụ ụdị nke sistemụ arụmọrụ dị ka nke mmelite ya / mbipute 8.0. Ya mere, dị ka nsụgharị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ na-abata, dịka ọ na - eme ugbu a na Android Pie (9.0), a ga - ewepụta nsụgharị kwekọrọ na gam akporo Go.
Ọ bụ ụdị nke ezubere maka ekwentị ndị dị ala, ụdị ndị dị ọnụ ala na ahịa. N'ọtụtụ ọnọdụ, ekwentị ndị na-eji ụdị a dị iche iche nwere ọnụ ahịa ihe na-erughị 100 euro. Dị nwere nkọwa ndị bụ isi, dịka RAM nke 1 GB ma ọ bụ obere na nchekwa dị n'ime nke 8 GB, dịka ọmụmaatụ.
Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche nkọwa nke ekwentị nke ụdị a, anyị nwere ike ịhụ na sistemụ arụmọrụ ga-arụ ọrụ nwayọ nwayọ ma nwee ọtụtụ nsogbu ọrụ na ya. Ọ bụ ya mere Google ji wepụta gam akporo Go. Nke mere na sistemụ arụmọrụ nwere ike ịrụ ọrụ n'ụdị igwe ndị a. Ọ ka bụ gam akporo, yana ngwa gam akporo, mana a na-emegharị ya na ọdụ kachasị dị na ahịa.
Gịnị Na-eme gam akporo Go Dị Iche?
Igwe na-ejedebe nwere obere ebe nchekwa. Yabụ, a na-achọ ka sistemụ arụmọrụ nwere oghere kachasị pere mpe na ha. Ya mere gam akporo Go weghaara obere ohere, n'ihi na ọ na-ahapụ naanị ọrụ ndị dị mkpa ma baa uru. Yabụ anyị enweghị bloatware na ụdị a. Ọnụ ọgụgụ nke ngwa ndị arụnyere na ekwentị dị obere, ọ bụ naanị ndị ahụ dị mkpa, yana, enweghị ngwa sitere n'aka ndị nrụpụta na nke a. Ikwesiri ime ka ohere di otutu.
Tụkwasị na nke ahụ, ihe niile dị na sistemụ arụmọrụ ejiriwo nke ọma rụọ ọrụ obere ka o kwere mee na ụdị ekwentị ndị a. Otu ihe dị mkpa nke gam akporo Go bụ na ọ na-enye ahụmịhe dị mma, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ụdị ndị a nwere obere ike. Maka ya, A tọhapụrụ nsụgharị ọkụ nke ngwa ngwa. Anyị nwere ụdị Go nke ngwa dị ka Gmail, Google Maps ma ọ bụ Chrome. N'ihi ya, ha na-arụ ọrụ nke ọma na ụdị a.
Ngwa ndị a weghara obere ohere ma were obere ihe na ekwentị. Agbanyeghị, dịka na gam akporo Go n'onwe ya, ọ bụghị ọrụ niile dị. Naanị ọrụ ndị ahụ dị mkpa dị.
Ya mere, anyị na-ahụkwa gam akporo Go agbadoro anya ịchekwa data na ihe onwunwe. Vingchekwa data bụ otu n’ime igodo nke sistemụ arụmọrụ. Eri obere data, ma na usoro na ngwa larịị. Nke a bụkwa ihe kpatara anyị ji nwee ngwa ha na mbipute Go ha, emebere maka ụdị a nke sistemụ arụmọrụ.
Ọzọkwa, anyị na-ahụ etu ndị ọzọ mekwara ngwa na ụdị Lite. Ha bụ nsụgharị dị mfe, nke na-eri obere ma nwee obere ọrụ, mana ejiri ekwentị na gam akporo Go dị ka sistemụ arụmọrụ na-ebupụta ha. Ebe ọ bụ na otu a ị nwere ike iji ha, n'ụzọ dị mma karịa. Ngwa dị ka Facebook ma ọ bụ Instagram nwere ụdị Lite ha.
Android Go = Android dị ọcha?
Otu n'ime mgbagwoju anya ndị a na-ahụkarị bụ nke na-eche na Android Go bụ ihe Ẹkot Android Dị Ọcha. Nke a pụtara na enweghị nhazi mkpuchi site na ndị nrụpụta, ma ọ bụ ngwa sitere na ya. Kama nke ahụ, ọ bụ nsụgharị nke ndị na-emepụta ya gafebeghị. Mana nke a abụghị ikpe na ụdị a anyị na-ekwu maka ya.
Ebe ọ bụ na gam akporo Go enweghị mgbochi ikike maka ndị na-emepụta ịgbakwunye oyi akwa nke ha Nhazi na ụdị a. N'ezie, Samsung na-ewebata usoro nke nhazi ya na njedebe dị ala na Go nke ha na-arụ ọrụ. Yabụ na ọ bụghị obere ihe, ụdị ndị ọzọ na-emekwa otu ihe ahụ taa.
Gam akporo Go bụ ihe dị iche iche nke na-ekwe nkwa ịnọgide na-aga n'ihu na ọkwa dị ala, ebe ọ bụ na nsonaazụ ya yiri ka ọ dị mma. Ọ bụghị ụdị nke anyị ga-ahụ mgbe niile na Spain ma ọ bụ Europe. Mana ọ dị mkpa maka mba ndị dara ogbenye, ebe ekwentị dị na njedebe. Ebe ọ bụ na ndị ọrụ a ga - enwe ezigbo ahụmịhe onye ọrụ n'oge niile. Ka nwere ụzọ dị anya ịga ahịa ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Gịnị bụ gam akporo Go? Kedu ka o si dị iche na ụdị ndị ọzọ?
Google Pixel 3 XL na ire ere tupu ngosi ya